Articles - Awakening Here Now
दुःख पनि सूक्ष्म हुन्छ । कहाँ, कहिले, कति हुन्छ थाहै हुन्न । दुःख मेट्ने हो भने आफू र अर्को भन्ने...
दुःख पनि सूक्ष्म हुन्छ । कहाँ, कहिले, कति हुन्छ थाहै हुन्न । दुःख मेट्ने हो भने आफू र अर्को भन्ने भेद मेटिनुपर्छ । अरूको दुःख मेट्नु सूक्ष्मरूपले आफ्नै दुःख मेट्नु हो ।
I am very happy to receive warm response from people who received Ramana biography in Nepalese language and enjoyed reading...
I am very happy to receive warm response from people who received Ramana biography in Nepalese language and enjoyed reading it. My gratitude goes to my Swiss friends who gifted money to publish this book and asked me to give it as gift to Nepalese people who are inquisitive.
तन्त्र साधना अध्यात्म परम्पराको महत्तम विकास हो। यसको महती उपयोग र गरिमा शब्दमा बताउन सकिंदैन। तन्त्र साधनाप्रति आकर्षण विश्वभर व्याप्त...
तन्त्र साधना अध्यात्म परम्पराको महत्तम विकास हो। यसको महती उपयोग र गरिमा शब्दमा बताउन सकिंदैन। तन्त्र साधनाप्रति आकर्षण विश्वभर व्याप्त हुँदो छ। तर, दुरुपयोग गर्नेहरू यही विधालाई आड लिन तम्सिइरहेका देखिन्छन्।
यदि तिमी आफ्नो लेखनद्वारा सास फेर्दैनौ भने, लेखनमा तिम्रो आक्रोश वा गीत प्रकट हुँदैन भने, बरु नलेख । किनभने यस्तो...
यदि तिमी आफ्नो लेखनद्वारा सास फेर्दैनौ भने, लेखनमा तिम्रो आक्रोश वा गीत प्रकट हुँदैन भने, बरु नलेख । किनभने यस्तो साहित्यको हाम्रो संस्कृतिलाई कुनै काम छैन ।
योग अनुष्ठान बनोस्
योग विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय हुन थालेको छ । यद्यपि योग अनुष्ठानका रूपमा होइन व्यायामका रूपमा लोकप्रिय बनेको छ । योगलाई...
योग विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय हुन थालेको छ । यद्यपि योग अनुष्ठानका रूपमा होइन व्यायामका रूपमा लोकप्रिय बनेको छ । योगलाई कसरी अनुष्ठान बनाउन सकिन्छ?
बुद्धले गौतमीलाई दुई-चार धर्मका वचन सुनाएर विदा गरेनन् । बुद्धलाई गौतमीको वास्तवमै कल्याण गर्नु थियो । अतः उनले फरक तरिका...
बुद्धले गौतमीलाई दुई-चार धर्मका वचन सुनाएर विदा गरेनन् । बुद्धलाई गौतमीको वास्तवमै कल्याण गर्नु थियो । अतः उनले फरक तरिका अपनाए, अनुकंपाका कारण, करुणाका कारण । करुणा मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन् – सत्त्वालम्बना करुणा, धर्मालम्बना करुणा र निरालम्ब करुणा ।
ध्यानको माध्यमले प्राप्त हुने पाँच अभिज्ञा दिव्यचक्षु, दिव्यश्रोत्र, परचित्त ज्ञान, ऋद्धिबल र पूर्वनिवासानुस्मृति हुन् । ऋद्धिसिद्धि किन आवश्यक हुन्छन् ?
निस्फला नेत्रविक्षेप न कर्तव्याः कदाचन । निध्यायन्तीव सततं कार्या दृष्टिरधोगता ।।
तान्त्रिक ध्यानका विधिहरुप्रति मानिसहरुको आकर्षण वर्तमान समयमा बढ्दै गएको पाइन्छ । तान्त्रिक विधिहरुका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । तन्त्रको ...
सबै कुरा अनित्य छन् भन्ने शिक्षा प्रकृतिले समेत संकेत गरिरहेको थियो। बज्रयानको विशेषता नै सबै घटना, परिस्थिति र स्थानलाई सकारात्मक...
सबै कुरा अनित्य छन् भन्ने शिक्षा प्रकृतिले समेत संकेत गरिरहेको थियो। बज्रयानको विशेषता नै सबै घटना, परिस्थिति र स्थानलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्दै र उपयोग गर्दै साधनामा अग्रसर हुनु हो।
आख्यानका जडभरतले केही उच्‍चतर उद्देश्यका लागि जडवत् भएको अभिनय गरेका थिए । उनलाई विमुक्ति सुखको खोजी थियो, त्यो प्राप्तिका निम्ति...
आख्यानका जडभरतले केही उच्‍चतर उद्देश्यका लागि जडवत् भएको अभिनय गरेका थिए । उनलाई विमुक्ति सुखको खोजी थियो, त्यो प्राप्तिका निम्ति सामान्य मानिसको जस्तो जीवनयापन गरेर सम्भव थिएन । त्यसैले उनी असामान्य व्यवहार देखाउँथे, जडता प्रदर्शन गर्थे
देवीको अस्त्र प्रहारले घायल भएको रक्तबीजले रगतबाट आफूलाई ‘क्लोनिङ’ गर्दै लाखौं डुप्लिकेट पैदा गर्यो । ...
हिमालमा उदाएको घाम : सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्
उज्यालो प्रकट हुने र साँझ खस्‍ने बेला धर्ती जति सुन्दर हुन्छ त्यति सायदै अरू बेला देख्‍न सकिन्छ ...
एकान्तवासमा सिद्धार्थ बुद्ध बने, महावीर भगवान् बने, शंकराचार्य जगद्गुरु बने । एकान्तवास उनीहरूको रोजाइ थियो, त्यसैले रूपान्तरणकारी बन्यो । हामी...
फूल तेरे है न मेरे, वाग ...
आफैंमाथि काम : महत्त्वाकांक्षालाई विश्राम
आध्यात्मिक परम्परामा आफैंमाथि काम गर्नुलाई साधना भनिन्छ । आफ्नो मनका रहस्य र क्षमता बोध गर्नु, आफ्नो व्यक्तित्त्वका ...
केही नगरी बस्‍नुको सार्थकता
मैले आफ्नो जीवनमा गरेको सर्वोत्कृष्ट कुरा केही नगरी बस्नु हो । र, मैले गरेको ...
कहाँ छ ध्यान ?
बाहिरी वस्तु तथा सेवाले आन्तरिक सुख र शान्ति दिन सक्दैनन्। यो कुरा आफ्नै अनुभव र अनुभूतिबाट बुझ्न थालेपछि मात्र मानिस...
बाहिरी वस्तु तथा सेवाले आन्तरिक सुख र शान्ति दिन सक्दैनन्। यो कुरा आफ्नै अनुभव र अनुभूतिबाट बुझ्न थालेपछि मात्र मानिस आध्यात्मिक पुस्तक पढ्न वा चर्चा सुन्न थाल्छ।
शरीरलाई लचक बनाउने योगासन विश्वको सबैतिर लोकप्रिय भइसक्यो । मनलाई लचक बनाउने ध्यान क्रमशः लोकप्रिय हुने चरणमा छ ...
विचार विज्ञान नामको कृतिमा खप्तडबाबाले विचार बिजुलीभन्दा बेगवान् र बलवान् हुन्छ भनेका थिए । उनै बाबाले आफ्ना ...
कसैले जीवनका रहस्यहरू असाधारण स्पष्टताका साथ बोलिरहेको छ भने त्यसलाई नसुनी रहनु सम्भव हुँदैन। सद्‌गुरु भनेर चिनिने आध्यात्मिक ...
एउटा गधाले एक आखर पढेको हुँदैन तर जीवनभर आफ्नो बाटो छोड्दैन । एउटा गुरु विद्यालय र विश्वविद्यालय समेत ...
सिद्धि भनेको सिद्दिनु -- शिवपुरी लेक सदियौंदेखि तपोभूमि रहिआएको छ। शिवपुरी बाबा र टोड्के बाबा सुनिइरहेका नाम हुन्। ...
क्रेग स्मिथ नमोबुद्ध गुम्बाबाहिर ध्यान मुद्रामा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । उनकी श्रीमती भेरोनिका गुम्बाभित्र बुद्धका हरेक मूर्तिसामु पालैपालो ...
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘ट्रुथ इज स्ट्रेन्जर देन ...
An article based on Tshokney Rinpoche's speech. The article talks about what is true happiness, how to find it in...
An article based on Tshokney Rinpoche's speech. The article talks about what is true happiness, how to find it in day to day life.
फ्रान्सबाट बुद्ध जयन्ती मनाउन लुम्बिनी आइपुगेका बुद्धप्रेमी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्न व्यग्र थिए। अघिल्लो साँझ लुम्बिनी पुग्‍नासाथ होटलमा ...
Autobiographical account on Meditation
कवितादेखि दर्शनसम्म ध्यानदेखि शून्यतासम्म
यदि तीन दिन सम्म कुनै किताब नपढ्ने हो भने बोलीमा बासी कुराको गन्ध आउन थाल्छ । ...
Buddhist monk Matthieu Ricard, popularly known as the happiest person on the planet recently gaveaspeech in Kathmandu on ...
Mahesh Acharya,astudent of computer engineering and beginner in meditation, asked me, “There are so many books, articles and ...
2019-04-07 |Gautam Buddha Sandesh
म अनन्त अनादि प्रज्ञा ...